အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ စတင် ရှမ်းပြည်တွင်း တိုက်ပွဲတွေ ခေတ္တ ရပ်စဲ မန္တလေးတိုင်း သပိတ်ကျင်းတွင် ရွေအမြင်ခဲများ တွေ့ရှိ၍ ဒေသခံများ လာရောက်သဖြင့် စည်ကားနေ
သံလွင်ရေကာတာ ပြဿနာ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှကို တိုက်ခိုက်မှု ပိုပြုလုပ်မည်ဟု အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက်အဖွဲ့ IS က ခြိမ်းခြောက်
ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်မှု ပိုမိုပြုလုပ်မည်ဟု အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက်အဖွဲ့ IS က ထပ်မံ ခြိမ်းခြောက်လိုက်သည်။
IS အဖွဲ့က နောက်ဆုံး ထုတ်ဝေသော Dabiq မဂ္ဂဇင်းတွင် "The Revival of Jihad in
Bengal" ဘင်ဂဲလ် မှ ပြန်လည် သက်ဝင် နိုးထလာမည့် ဂျီဟတ် ခေါင်းစဉ် ဖြင့် ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ပါရှိလာပြီး ယင်းဆောင်းပါးတွင် ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှကို တိုက်ခိုက်ရန် ခြိမ်းခြောက်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။
ပျောက်ဆုံးနေသော မလေးရှား လေယာဉ် MH 370 အား နိုင်ငံစုံမှ ရှာဖွေရာတွင်
ကူညီရန် တရုတ်နိုင်ငံက သြစတြေးလျ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄.၅ သန်း)
ထည့်ဝင် မည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်က နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ က
ယင်းကြေညာချက်အား ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်က ဒေသတွင်း ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများ ကျင်းပနေစဉ်အတွင်း သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မဲလ်
နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် ၂၀၁၅
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လွယ်လင်ခရိုင် မိုင်းရှူးမြို့ နှင့် မိုင်းနောင်မြို့ ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွါးရာဒေသရှိ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ၏ တပ်စခန်းများအားလုံး ဆုတ်ခွါပေးရန် ရန်ကုန်မြို့တွေ့ဆုံမှုအပြီး
နောက်တရက် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်နံနက်ပိုင်းက သျှမ်းပြည်တပ်မတော်၏ တာဝန်ခံ အရာရှိထံ အစိုးရဘက်က ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလာသည် ဟုသိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက အစိုးရလျှပ်စစ်ဝန်ြ
ဖားကန့် ဒေသရှိ ရေမဆေး ကျောက်ရှာဖွေ နေကြသူများ ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာ အုပ်စု နှင့် ဆိပ်မူကျေးရွာ အုပ်စု အကြားရှိ ဆန်ခတ်ကူး ကျေးရွာ အပိုင်းအတွင်း ယနေ့ နံနက်က စွန့်ပစ် မြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့် မြေစာပုံ အောက်ခြေရှိ အိမ်ခြေ ၈၀ ခန့် မြေမြှုပ်ပျက်စီးကာ လူပေါင်းရာချီ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း လက်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဆောင်နေသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ဆွတ်အောင်ရွာအနီးက ကံခါစုပေါင်းမြေစာပုံမှာ ဒီကနေ့ မနက် အစောပိုင်း ၃ နာရီလောက်က စွန့်ပစ်မြေစာပုံပြိုကျလို့ ခန့်မှန်းလူ ၂ဝဝ လောက်ပိတ်မိနေပြီး ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိ လူသေအလောင်း ၄ဝ လောင်း တွေ့ရှိထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဲ့ဒီမြေစာပုံပြိုကျတဲ့နေရာနဲ့ သုံးမိုင်လောက် အကွာက ဆန်းကြွယ်ကျေးရွာမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ဆန်းကြွယ်ဆရာတော် ဦးကဝိသာရ က RFA ကို အခုလိုမိ
ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံ မြို့တော်ဘရပ်ဆဲလ်မြို့ ဒေသတဝိုက်ရဲ့ လုံခြုံရေးအခြေနေကို အမြင့်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။
မက်ထရိုမီးရထားဘူတာရုံတွေကို တနင်္ဂနွေနေ့မတိုင်မီအထိပိတ်ထားပြီး ကုန်တိုက်တွေနဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွေအပါအဝင် လူစည်ကားနေရာတွေက်ို လူတွေ မသွားကြဖို့သတိပေးချက် ကြေညာချက် တစ်ေ
အာဆီယံ၁၀နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကို တရုတ်ခေါင်းဆောင် လီကျီရန်နှင့်အတူတွေ့ရစဉ်
ကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးကြမယ့်အဓိက အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်တို့အငြင်းပွားနေတဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေပိုင်နက် ကိစ္စလည်းထိပ်ဆုံးကပါပါတယ်။
မနက်ဖြန်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ အာဆီယံခေါင်းဆောင်၁၀ဦးဟာ အာဆီယံစီးပွားရေး သဘောတူညီမှုစာချုပ်ကို အတူတကွလက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ဖို့ရှိပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ အရှေ့အာရှထိပ်သီးညီလာခံ တက်ရောက်နေတဲ့
အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမားဟာ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဒုက္ခသည်ကလေးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့က လေ့လာသင်ကြားရေးစင်တာမှာ မလေလးရှားနိုင်ငံက ဆင်းရဲသားကလေးငယ်တွေ
(နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် တွေ့ရသည့် မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ်ရာဇတ်) ဓါတ်ပုံ AFP
အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်အကြမ်းဖက်ဝါဒကို ရင်ဆိုင်တိုက်ဖျက်ကြဖို့ မလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ်ရာဇတ်က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ခေါင်းဆောင်တွေကို တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံထိပ်သီး ညီလာခံမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ရာဇတ်က "ယဉ်ကျေးမှုမဲ့ပြီး လူမဆန်တဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ စတင် Posted: 21 Nov 2015 06:17 AM PST
မလေးရှားနိုင်ငံ Kuala Lumpur မြို့တော် မှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံထိပ်သီး စည်းဝေးပွဲ မှာ လက်ရှိ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌက မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ရွေးကောက် ပွဲတွေ အောင်အောင် မြင်မြင် ကျင်းပ နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ် အာဆီယံ အဖွဲ့က ချီးကျူးခဲ့ ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသာမက ဒေသတခုလုံး တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ တိုးတက်ရေး အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အ
ရှမ်းပြည်တွင်း တိုက်ပွဲတွေ ခေတ္တ ရပ်စဲ Posted: 21 Nov 2015 06:15 AM PST
မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်က အောက်ခြေတပ်တွေကို ထိုးစစ်တွေရပ်ဖို့ ညွှန်ကြား လိုက်တဲ့ အတွက် ရှမ်းပြည်နယ် အလယ်ပိုင်းတွင်း ရှမ်းမြောက်ပိုင်းတပ် နဲ့မြန်မာ တပ်တို့ကြား တိုက်ပွဲတွေ ခေတ္တရပ်တန့်သွားတယ်လို့ SSA ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တပ် ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူးကြီးကပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်ရှောင် ထွက်ပြေးနေရတဲ့ ထောင်ချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ကတော့ မိမိတို့နေရပ်
သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် ဇရက်ကွင်းကျေးရွာ အုပ်စု။ကျောက်ဖြူ ကျေးရွာတွင် နိူဝင်ဘာ ၂၁-ရက်နေ့က MPTမှာမြေအောက် ကေဘယ်ကြိုးများသွယ်တန်း ရန် မြေသားများတူးဖေါ်စဉ် ရွေအမြင်ခဲများတွေ့ရ သဖြင့်
ဒေသခံများလာရောက်ကြသဖြင့် စည်ကားနေကြောင်း သပိတ်ကျင်းမြို့ခံတစ်ဦးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
“ထွက်တာတော့ ဟုတ်တယ်ဗျ။ရွာနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်း ကျွန်တော့ဆီဖုန်းဆက်ပြော တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မအားလို့ မသွားတော့ဘူး။”ဟု သပိတ်ကျင်ြး
ဂျောင်း . . . ဂျောင်း…. . . ဒုတ်…. . . ဒုတ်…. . .
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အထည်ချုပ်စက်ရုံ တနေရာ။ အချိန်က မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတိတိ။ နေအပူချိန်သည် အမြင့်ဆုံးဒီဂရီသို့ရောက်ရှိနေသည်။
ဂျောင်း . . . ဂျောင်း . . .…ဒုတ် . . . ဒုတ် . . .
သူမတို့၏ ခြေအစုံတို့သည် စက်ခုံနင်းပြား အား မညီမညာနင်းနေရင်း ရုတ်တရက်အခန်းကျယ် ကြီးထောင့်မှ အလန်းသံထွက်လာတော့သည်။
ဂရီး . . . ဂရီ . . .
အလန်းသံကြောင့် စက်နင်းနေသည့် အထည်ချု
တရုတ် နိုင်ငံ ရှီးချန်း ဂြိုလ်တု လွှတ်တင်ရေး စခန်းမှ လာအို-၁ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုလ်တု အား နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်နေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ် နိုင်ငံ နှင့် လာအို နိုင်ငံ တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် လာအို-၁ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုလ်တု အား တရုတ် နိုင်ငံ ရှီးချန်း ဂြိုလ်တု လွှတ်တင်ရေး စခန်းမှ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင် နိုင်ခဲ့သဖြင့် အရက်မူးပြီး နှိပ်စက်သဖြင့် ခင်ပွန်းကို ဓားဖြင့်ထိုး
စစ်ကိုင်းမြို့ မီးရထားရပ်ကွက် မီးရထား လိုင်းခန်းတွင် ယခုလ( ၁၉)
ရက်နေ့ ညနေ (၅း၃၀) နာရီအချိန်တွင် အရက်မူးကာ နှိပ်စက်သည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား ဇနီးဖြစ်သူက ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့သည့် အတွက် ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ သေဆုံးသွားခဲ့ရကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရသည်။
မီးရထားဝန်ထမ်း လိုင်းခန်းတွင် နေထိုင်သည့် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်---------သည် သားဖြစ်သူ ကို--------(၂၈)နှစ်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ IS ချေမှုန်းရေး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံး လုပ်ဆောင်ဖို့ လုံခြုံရေးကောင်စီ တိုက်တွန်း
အားလုံး အတူ ပူးပေါင်း ပြီး လက်ရှိ လုပ်ဆောင် နေကြတာတွေ ထက် ၂ ဆ တိုး ဆောင်ရွက် ကြမယ်။
အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံ အဖွဲ့ IS ကို တိုက်ခိုက် ချေမှုန်းရေးမှာ ကမ္ဘာတလွှားက နိုင်ငံတွေ အားလုံး ပါဝင် ကြဖို့ တောင်းဆိုကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ လုံခြုံရေး ကောင်စီကနေ ကန့်ကွက်မယ့်သူ မရှိ တခဲနက် ဆုံးဖြတ် လိုက် ပါတယ်။
ဆီးရီးယားနဲ့ အီရတ် နိုင်ငံထဲက IS အဖွဲ့ တွေကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ အားလုံး အတူ
ပူးပေါင်း ပြီး လက်ရှိ လုပ်ဆောင် နေကြ
ဓားစာခံ အနေနဲ့ ပိတ်မိ နေခဲ့ ကြရတဲ့ လူပေါင်း ၁၃၀ ကျော် ပြန်လည် လွတ်မြောက်
မာလီ နိုင်ငံမှာ အရေးပေါ် အခြေအနေ ၁၀ ရက် ကြေညာလိုက် ပါတယ်။
မြို့တော် ဘာမာကို မှာ ရှိတဲ့ ဇိမ်ခံ ဟိုတယ် ရာဒစ်ဆန် ဘလူး ကို သေနတ်သမားတွေ က စီးနင်း တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပေါ် ခဲ့တဲ့ နောက် အခုလို ကြေညာ လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုတယ် ကို ဝင်စီးထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေ နဲ့ တိုက်ခိုက် နေမှု ကတော့ ပြီးဆုံး သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ဆီးနိတ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Mitch McConnell ပုံ ။ Photo: thinkprogress.org
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိအာဏာရအစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကို လေးစားလိုက်နာပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း အာဏာလွှဲပြောင်းပေးမယ်ဆိုရင် အမေရိကန်အစိုးရက ချမှတ်ထားတဲ့ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ပိုမိုဖြည်လျှော့ပေးဖို့ Republican ပါတီဝင် အထက်လွှတ်တော်အမတ် နှစ်ဦးက တိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။
အခုလ ၈ ရက်နေ့က အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးဆုံးသွား
မကွေးမြို့နယ်အတွင်း လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း တည်ဆောက်ဖို့ သိမ်းဆည်းထားတဲ့မြေတွေထဲက ပိုလျှံတဲ့ယာမြေတွေကို ပြန်ပေးဖို့ အစီအစဉ်မရှိတဲ့အပြင်၊ လျော်ကြေးကိစ္စကိုလည်း လက်ရှိတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့သာ
ညိနှိုင်းကြဖို့ စစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေ က မြေသိမ်းခံထားရတဲ့ တောင်သူတွေကို ပြောလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မကွေးအခြေစိုက် RFA သတင်းထောက် ကိုဇော်တူးက ပေးပို့ထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ရာထူးကနေ အငြိမ်းစား ယူထားပြီ ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ဟောင်း ဦးသန်းရွှေရဲ့ မြေး ဖြစ်သူ ကို နေရွှေသွေးအောင် ခေါ်
ဖိုးလပြည့်တို့ တွေ့ ဆုံခဲ့ကြတဲ့ ဖြစ်ရပ် ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ အကြား ဆက်ဆံရေး တိုးမြင့် ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်တဲ့ လုပ်ရပ် အနေနဲ့ သုံးသပ် နေကြ ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပစဉ်။ Photo: RFA
အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနတွေက လွှတ်တော်ကို ကတိပေးထားတဲ့ လုပ်ငန်း ၈၄ ခုကို လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ဆိုပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးက လွှတ်တော်ထံတင်ပြတောင်းဆိုထားတာကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ကိုယ်စားလှယ်အများစုက ဒီနေ့ ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးကြပေမယ့် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာ ပယ်ဖျက်ဖို့ ထောက်ခံမဲများတဲ့အ
မြိတ် နိုဝင်ဘာ ၂၀
မြိတ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ်တားဆီး ကာကွယ်ရေး အတွက် အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ နိုဝင်ဘာလ (၁၉)ရက် နေ့လယ်(၃း၄၀)နာရီက မြိတ်မြစ်အတွင်းရှိ ကလွင်ရေလယ် မီးပြ၏ အရှေ့ တောင်ဘက် (၁)မိုင်ခွဲခန့် အကွာ ပင်မကမ်းခြေတွင် ကမ်းထိုး ရပ်နားထားသော ခန့်ဟိန်းဇင်အောင် အမည်ရှိ မသင်္ကာဖွယ်ကုန်တင် စက်လှေတစ်စီးတွင် ကျပ်သိန်း(၅၇၂၀၀)ကျပ်တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ သံလွင်ရေကာတာ ပြဿနာ Posted: 20 Nov 2015 04:01 PM PST
သံလွင်မြစ်ဟာ မြန်မာပြည်အရှေ့ ပိုင်းရဲ့  အသက်သွေးကြောဖြစ်တာမို့ ရေကာတာ ဆောက်မယ့်စီမံကိန်းကို ဒေသခံတွေ ကန့်ကွက်နေကြတာ ကြာပါပြီ။ သံလွင်ရေကာတာ ဆန့်ကျင်ရေးဟာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုလို ဖြစ်လာပါတယ်။ ရှေ့ နှစ်မှာ ဖွဲ့စည်းမယ့် အစိုးရသစ် ရင်ဆိုင်ရမယ့် အဓိက ပြဿနာတခု ဖြစ်ပါတယ်။ သံလွင်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်ကြောင်း အရပ်သားအဖွဲ့အစည်း တ